Vitamin Sea – My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
နှဝေငျလာပွီ….နှရောသီအားလပျရကျတှနေီးလာပွီဆိုတာနဲ့… အတျောမြားမြားရဲ့အတှေးထဲဝငျလာတာကတော့ ကမျးခွမှော အပနျးဖွဖေို့ပါ။
သှားလာစရာနရောဒသေတှအေမြားကွီးရှိတဲ့ထဲကမှ ဘာကွောငျ့ အပနျးဖွဖေို့ ကမျးခွကေိုရှေးခယျြကွသလဲဆိုတာ စိတျဝငျစားစရာပါ။
အကွောငျးရငျးကတော့ လှနျခဲ့တဲ့နှဈပေါငျးမြားစှာတညျးက ပငျလယျကမျးခွရေဲ့ ဒီလိုအကြိုးကြေးဇူးလေးတှကေို လကျတှသေိ့ရှိခဲ့ကွလို့ပေါ့….
(၁)ပငျလယျရဟော အသားအရညျကို ကနျြးမာစတေယျ။
ဆားဓာတျပါတဲ့ ပငျလယျရညျဟာ သငျဈေးကွီးပေးဝယျနရေတဲ့ မကျြနှာသဈဆေးတှေ၊မကျြနှာဂြီးခြှတျပေးတဲ့ အလှကုနျပစ်စညျးတှထေကျ ပိုပွီး အရပွေားကို ဂြီးခြှတျပေးနိုငျပါတယျ။ခြှေးပေါကျတှကေို နကျရှိုငျးစှာသနျ့စပေေးနိုငျပွီး အရပွေားပျေါက ဆဲလျအသတှေကေို လညျးဖယျရှားပေးနိုငျပါတယျ။
သငျ့ဟာ ဝကျခွံတှကွေောငျ့စိတျညဈနရေသူဆိုရငျ ပငျလယျရဟော သငျ့ကိုစိတျအနှောငျ့အယှကျဖွဈစတေဲ့ဝကျခွံတှကေို ဖယျရှားပေးမယျ့ အကူအညီပဲဖွဈပါတယျ။
ပငျလယျရမှောပါဝငျတဲ့ ဗီတာမငျနဲ့သတ်တုဓာတျတှဟော သငျ့အသားအရကေို တငျးရငျးတောကျပစပွေီး ရဓောတျပွနျလညျဖွညျ့တငျးပေးမှာ ဖွဈလို့ ကမျးခွကေပွနျလာတာနဲ့ သငျ့အသားအရဟော အရငျကထကျ သိသိသာသာပိုကောငျးလာတာကို တှရေ့မှာပါ။
(၂)ပငျလယျထဲရကေူးခွငျး၊ရစေိမျခွငျးက သငျ့ရဲ့တောငျ့တငျးနတေဲ့ ကွှကျသားတှကေိုပွလြေော့စပွေီး၊ သှေးလညျပတျမှုကောငျးစပေါတယျ။
ခန်ဓာကိုယျရဲ့ နာကငျြကိုကျခဲမှုတှကေိုလညျး သကျသာစပေါတယျ။ ရကေူးခွငျးဟာ လကေ့ငျြ့ခနျးအပြော့စားတဈမြိုးဖွဈပွီး Happy Hormone (ပြျောရှငျစတေဲ့ ဟျောမုနျး)လို့ချေါတဲ့ Endorphin ဟျောမုနျးကိုထှကျစလေို့ စိတျပြျောရှငျမှုကို ဖွဈပျေါစပေါတယျ။
(၃)ဆားအငှအေ့သကျလေးတှပေါဝငျတဲ့ ပငျလယျလဟော စိတျခံစားမှုကောငျးစပေါတယျ။
လူမှုရေး၊အလုပျ၊မိသားစုအရေး၊ငှရေေးကွေးရေး၊ကနျြးမာရေး စတဲ့ဘကျပေါငျးစုံက ဖိစီးမှုတှဆေီက လှတျမွောကျဖို့ ပငျလယျလကေ ကူညီပါလိမျ့မယျ။ပငျလယျလကေို တဈဝကွီးရှူ ပွီး စိတျဖိစီးမှုတှကေို မောငျးထုတျလိုကျပါ။ပငျလယျမှာ တဝကွီး စိတျအပနျးပွပွေီးမှ စိတျသဈလူသဈ အိုငျဒီယာအသဈအဆနျးမြားနဲ့ သငျ့တဈနတေ့ာ လုပျငနျးတှကေို တကျကွှလနျးဆနျးစှာပွနျလညျစတငျလိုကျပါ။
သငျလညျးတှဖေူ့းမှာပါ…..ဇာတျကားအမြားစုမှာ… မငျးသားမငျးသမီးတှေ ဆေးရုံကဆငျး၊နလနျထစအခြိနျဆို ပငျလယျကမျးခွဆေီချေါသှားပွီး အပနျးဖွကွေတာမြိုးပေါ့။ တကယျလကျတှမှေ့ာလညျး ပငျလယျကမျးခွဟော ကနျြးမာရေး မကောငျးသူတှအေတှကျ လနျးဆနျးကနျြးမာစပေါတယျ။
စိတျအတှကျရော ခန်ဓာကိုယျအတှကျရော အာဟာရတှပေေးစှမျးတဲ့ ပငျလယျကွီးမို့ Vitamin Sea လို့တောငျ တငျစားကွပါတယျ။ ကဲ…..ရှလေ့ာမယျ့ ရုံးပိတျရကျတှမှော အပနျးဖွဖေို့နရောရှေးရခကျ မနတေော့ဘဲ ပငျလယျကမျးခွတေဈခုကိုသာ အမွနျရှေးခယျြလိုကျစို့!
နွေဝင်လာပြီ….နွေရာသီအားလပ်ရက်တွေနီးလာပြီဆိုတာနဲ့… အတော်များများရဲ့အတွေးထဲဝင်လာတာကတော့ ကမ်းခြေမှာ အပန်းဖြေဖို့ပါ။
သွားလာစရာနေရာဒေသတွေအများကြီးရှိတဲ့ထဲကမှ ဘာကြောင့် အပန်းဖြေဖို့ ကမ်းခြေကိုရွေးချယ်ကြသလဲဆိုတာ စိတ်ဝင်စားစရာပါ။
အကြောင်းရင်းကတော့ လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာတည်းက ပင်လယ်ကမ်းခြေရဲ့ ဒီလိုအကျိုးကျေးဇူးလေးတွေကို လက်တွေ့သိရှိခဲ့ကြလို့ပေါ့….
(၁)ပင်လယ်ရေဟာ အသားအရည်ကို ကျန်းမာစေတယ်။
ဆားဓာတ်ပါတဲ့ ပင်လယ်ရည်ဟာ သင်ဈေးကြီးပေးဝယ်နေရတဲ့ မျက်နှာသစ်ဆေးတွေ၊မျက်နှာဂျီးချွတ်ပေးတဲ့ အလှကုန်ပစ္စည်းတွေထက် ပိုပြီး အရေပြားကို ဂျီးချွတ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ချွေးပေါက်တွေကို နက်ရှိုင်းစွာသန့်စေပေးနိုင်ပြီး အရေပြားပေါ်က ဆဲလ်အသေတွေကို လည်းဖယ်ရှားပေးနိုင်ပါတယ်။
သင့်ဟာ ဝက်ခြံတွေကြောင့်စိတ်ညစ်နေရသူဆိုရင် ပင်လယ်ရေဟာ သင့်ကိုစိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေတဲ့ဝက်ခြံတွေကို ဖယ်ရှားပေးမယ့် အကူအညီပဲဖြစ်ပါတယ်။
ပင်လယ်ရေမှာပါဝင်တဲ့ ဗီတာမင်နဲ့သတ္တုဓာတ်တွေဟာ သင့်အသားအရေကို တင်းရင်းတောက်ပစေပြီး ရေဓာတ်ပြန်လည်ဖြည့်တင်းပေးမှာ ဖြစ်လို့ ကမ်းခြေကပြန်လာတာနဲ့ သင့်အသားအရေဟာ အရင်ကထက် သိသိသာသာပိုကောင်းလာတာကို တွေ့ရမှာပါ။
(၂)ပင်လယ်ထဲရေကူးခြင်း၊ရေစိမ်ခြင်းက သင့်ရဲ့တောင့်တင်းနေတဲ့ ကြွက်သားတွေကိုပြေလျော့စေပြီး၊ သွေးလည်ပတ်မှုကောင်းစေပါတယ်။
ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ နာကျင်ကိုက်ခဲမှုတွေကိုလည်း သက်သာစေပါတယ်။ ရေကူးခြင်းဟာ လေ့ကျင့်ခန်းအပျော့စားတစ်မျိုးဖြစ်ပြီး Happy Hormone (ပျော်ရွှင်စေတဲ့ ဟော်မုန်း)လို့ခေါ်တဲ့ Endorphin ဟော်မုန်းကိုထွက်စေလို့ စိတ်ပျော်ရွှင်မှုကို ဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။
(၃)ဆားအငွေ့အသက်လေးတွေပါဝင်တဲ့ ပင်လယ်လေဟာ စိတ်ခံစားမှုကောင်းစေပါတယ်။
လူမှုရေး၊အလုပ်၊မိသားစုအရေး၊ငွေရေးကြေးရေး၊ကျန်းမာရေး စတဲ့ဘက်ပေါင်းစုံက ဖိစီးမှုတွေဆီက လွတ်မြောက်ဖို့ ပင်လယ်လေက ကူညီပါလိမ့်မယ်။ပင်လယ်လေကို တစ်ဝကြီးရှူ ပြီး စိတ်ဖိစီးမှုတွေကို မောင်းထုတ်လိုက်ပါ။ပင်လယ်မှာ တဝကြီး စိတ်အပန်းပြေပြီးမှ စိတ်သစ်လူသစ် အိုင်ဒီယာအသစ်အဆန်းများနဲ့ သင့်တစ်နေ့တာ လုပ်ငန်းတွေကို တက်ကြွလန်းဆန်းစွာပြန်လည်စတင်လိုက်ပါ။
သင်လည်းတွေ့ဖူးမှာပါ…..ဇာတ်ကားအများစုမှာ… မင်းသားမင်းသမီးတွေ ဆေးရုံကဆင်း၊နလန်ထစအချိန်ဆို ပင်လယ်ကမ်းခြေဆီခေါ်သွားပြီး အပန်းဖြေကြတာမျိုးပေါ့။ တကယ်လက်တွေ့မှာလည်း ပင်လယ်ကမ်းခြေဟာ ကျန်းမာရေး မကောင်းသူတွေအတွက် လန်းဆန်းကျန်းမာစေပါတယ်။
စိတ်အတွက်ရော ခန္ဓာကိုယ်အတွက်ရော အာဟာရတွေပေးစွမ်းတဲ့ ပင်လယ်ကြီးမို့ Vitamin Sea လို့တောင် တင်စားကြပါတယ်။ ကဲ…..ရှေ့လာမယ့် ရုံးပိတ်ရက်တွေမှာ အပန်းဖြေဖို့နေရာရွေးရခက် မနေတော့ဘဲ ပင်လယ်ကမ်းခြေတစ်ခုကိုသာ အမြန်ရွေးချယ်လိုက်စို့!
Skin Care For Beach